Wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya oo u hambalyeeya shacabka Soomaliyeed – Radio Muqdisho
Wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya oo u hambalyeeya shacabka Soomaliyeed
Wakiilka Gaarka ah ee Guddoomiyaha Midowga Afrika wuxuu sheegay in dabbaaldegga todobaadka xorriyadda ee sannadkaan uu dadweynaha Soomaaliyeed uga dhigan yahay mid ay ku soo xasuusanayaan dadaalkii jiilalakii ka horreeyey u soo galeen sidii ay heeryada gumeysiga isaga tuuri lahaayeen, iyo kan ay iminka ugu jiraan sidii mar kale uga jafjafan lahaayeen dagaallada sokeeyey ee mirihii xorriyadda curdaan dhariyey.
“Waxaan ugu hambalyeynayaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ee u taagan in ay Soomaaliya mar kale ku soo dabbaalaan tubta horumarka dowladnimo. Waxaana sidoo kale bogaadinayaa dadkii naftooda u huray sidii dalka xasillooni waarta loogu soo dabbaali lahaa islamarkaana dadweynaha loogu suurtogelin lahaa in ay ku naalloodaan nolosha ay u haarayaan,” ayuu yiri Danjire Francisco Madeira.
Sannadguuradan xasuus gaar ahaan ayey leedahay, maadaama Soomaalidu qabanayaan doorashooyin dadban oo lugu soo xulayo mudaneyaasha baarlamaanka iyo madaxweyne, talada dalka majaraha u hayn doona afarta sano ee soo socda.
AMISOM waxay ku bogaadineysaa hoggaanka Soomaalida in ay mddo cayiman u qabteen geeddi-socodka doorashooyinka, ka dib kulankii Madasha Hoggaamiyeyaasha Qaranka ee dhawaan Baydhaba lugu soo gabagabeeyey, kaas oo la iskula afgartay arrimo badan oo guul u horseedi kara aayaha siyaasadda dalka.
“Waxaan si weyn u rumeysanahay in Soomaaliya cagta saartay toobiyaha saxda ah ee lugu tiigsanayo nabadgelyo iyo xasillooni waarta oo dalku ku tillaabsado, taas oo muwaadiniinta u sahli kara in ay ku naalloodaan xorriyadda ay ku taamayaan”, ayuu yiri Danjire Madeira.
Tan iyo markii la aas-aasay AMISOM 2007, horumar ballaaran ayuu dalka ku tillaabsaday, iyadoo gacan laga helayo dadka Soomaaliyeed ee same-jeclaha ah ee doonaya qaran nabad iyo barwaaqo ku dhisan. Tusaale ahaan, hawlgallada ay sida wadajirka ah u fuliyeen AMISOM iyo ciidamada ammaanka ee Soomaaliya, waxaa lugu xoreeyey qaybo badan oo dalka ka mid ah, halkaas oo ay markii hore gacanta ku hayeen kooxaha argagixisada ah ee Al-Shabaab.
AMISOM, dowladda Federaalka ah iyo maamul goboleedyada dalka ka jira, ayaa si dhow uga wada shaqeynaya xasilinta goobaha la xoreeyey, si amarka iyo kala dambeynta loogu soo celiyo.
Ilaa hadda, AMISOM waxay tababartay kumannaan ka mid ah ciidamada Booliska Soomaaliyeed, ku waas oo loo daabulay qaybo kala duwan oo dalka ka mid ah.
Waxaa intaas dheer, AMISOM oo fulineysa mashruuca saameynta deg-degga ah ee (QUIPS), waxay dhistay ama ay dayactirtay saldhigyo Booliis oo dalka ku firirsan, si adeegga amniga bulshada loogu soo dhaweeyo.
Ujeedka ugu weyn hawlgalka AMISOM waa in dalka laga xoreeyo kooxaha Al-Shabaab oo shacab u qoonsaday fursad ay kaga faa’ideystaan karaankooda dalka oo nabad ah.
Danjire Madeira wuxuu ugu baaqay beesha caalamka in aysan Soomaaliya gabin saacaddan xaasaasiga ah, ee ay sii wadaan taageeridda dadaallada AMISOM iyo dowladda Federaalka ah ay ugu jiraan, ka libkeenidda ujeeddooyinka lugu hiigsanayo nabad waarta iyo xasillooni ka dhaqangasha dalka.
Allaha u naxariistee Sheekh Cumar Yare oo caawa lagu dilay Muqdisho
Tartamayaasha degmada Yaaqshiid oo caawa u soo gudbay wareegga kama dambeysta ah “SAWIRRO”